खेलकूद परिषद, खेलाडी कि मानव तस्करी ?
काठमाडौं । नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालका तुरुपको एक्का भनेर चिनिएका केशवकुमार विष्ट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव छन् । यिनको कार्यकालमा खेलकुदमा विकास भन्दा भ्रष्टाचार र अनियमिततामात्र होइन, खेलाडीका आवरणमा मानव तस्करी बढेको आरोप लागेको छ ।
झण्डै २ सय खेलसंघहरु छन् । यसअघिको सरकारका मन्त्री राजन केसीका पालामा एयरपोर्टबाट गैरखेलाडी फिर्ता भएपछि ठूलै काण्ड मच्चिएको थियो । त्यसपछि खेलाडीका नाममा गैरखेलाडीलाई जापान पठाउन लाग्दा रोकिएको र कालोसूचीमा राखिए पनि अध्यागमन विभागमा ठूला नेताको दबाब दिन लगाएर कालोसूचीलाई सेता पार्दै खेलाडी पठाउने तैयार भयो । खेलाडी विदेश लैजाने र उतै छोड्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सबैभन्दा बदनाम निकाय बन्नपुगेको छ ।
पछिल्लो घटनाअनुसार गत महिना डब्लु केकेएफ कोसकिा कराँतेडोको सेमिनारमा ८ खेलाडी जापान जान लागेकोमा यिनै रोके र पछि भित्री सेटिङ मिलाएर जान दिनु भन्ने पत्र लेखेपछि अध्यागमनका कर्मचारीहरु जिल्लाराम परेका थिए ।
यो काण्डको भित्री रहस्य भनेर सेल्फ डिफेन्स संघका अध्यक्ष डीबी रानापाल नेपाली र कोषाध्यक्ष सन्जु महर्जनले प्रतिब्यक्ति १५ लाख लिएको आरोप छ । यसमा यी सदस्य सचिव केशव विष्टसमेत संलगन भएको परिषदभित्रै चर्चा छ । यो प्रकरणमा जापान जान लागेका खेलाडीहरुमा सुकुमान लामा, नाम्गेल शेर्पा, विपिन सुनाम, लक्ष्मी लामा, भीमबहादुर रानामगर, अर्जुनकुमार मगर, चन्द्रबहादुर थापामगर र अर्जुन पुन रहेको नाम प्रचारमा आएको छ । सन्जु महर्जनका अनुसार सदस्य सचिव विष्ट अरको कुरा सुन्छन् । यथार्थ के हो ? विष्ट मौन छन् । यिनले भ्रष्टाचारको पोल खुल्ला भनेर महालेखाले खटाएको कर्मचारीलाई पस्न रोकेका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मानव तस्करीको केन्द्र बन्दै गएको छ । धेरै घटनाहरुको क्रममा पछिल्लो पटक दानबहादुर घिसिङ कोरियामा मानव तस्करीको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । तेक्वान्दो संघका महासचिव दीपराज गुरुङ पनि मानव तस्करीमा मुछिए । क्यानडा गएका यादव कुँवर तथा कोरिया गएका मानध्वज लामा, रामकुमार पाण्डे, खम्बा राई, रमेश शाही र प्रमोद मानन्धर फर्केका छैनन् । मकाउसम्म पनि मानव तस्करी भइरहेको बताइन्छ ।